Guangzhou Weipu mechanical na Electrical Co., Ltd. bụ ọkachamara na ịmepụta ngwaọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ahụmịhe bara ụba gbakọtara kemgbe ọtụtụ afọ emeela ka Weipu bụrụ ụlọ ọrụ pụtara ìhè n'ọhịa nke ngwa eletriki na China. N'otu oge ahụ, Weipu bụkwa onye otu ...
Mmepe nke China cable ụlọ ọrụ si elu-ọsọ oge ka ike oge
Waya na USB ụlọ ọrụ bụ ihe dị mkpa na-akwado ụlọ ọrụ na China aku na uba na-ewu. Ọ na-enye akụrụngwa maka ụlọ ọrụ ike na ụlọ ọrụ nkwukọrịta, na-echekwa otu ụzọ n'ụzọ anọ nke uru nrụpụta nke ụlọ ọrụ eletriki China. Ọ bụ ụlọ ọrụ nke abụọ kachasị na ...
Emetụta ike mmụba nke ụlọ ọrụ ikanam ụlọ na mmetụta dị mma nke atumatu gọọmentị, ụlọ ọrụ China na-aga n'ihu na-ekpo ọkụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-egosi ezigbo omume n'ihe gbasara oke na ogo. Organizationsfọdụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ebu amụma na China̵ ...
Ogwe mmiri na-enweghị mmiri bụ plọg nwere arụmọrụ na-enweghị mmiri, ma nwee ike ịnye njikọ eletrik na nchekwa, akara ngosi, wdg. nchọpụta equipm ...
site ha na 20-04-28
Ogwe mmiri na-enweghị mmiri bụ plọg nwere arụmọrụ mmiri, ma nwee ike inye njikọ dị mma ma nwee ntụkwasị obi maka ọkụ eletrik na akara ngosi. Ọmụmaatụ: Ikanam n'okporo ámá ọkụ, Ikanam mbanye ike, Ikanam ngosi meziri, ụlọ ọkụ, ụgbọ mmiri, ihe mmepụta ihe, ihe nkwukọrịta, nchọpụta equipmen ...